डा.ओममुर्ति अनिलको सुझाव : यसरी मनाऔं नयाँ वर्ष | Hamro Doctor News
डा.ओममुर्ति अनिलको सुझाव : यसरी मनाऔं नयाँ वर्ष
आजबाट अंग्रजी नयाँ वर्ष सन् २०१९ सुरु भएको छ । यस अवसरमा सबैले एक अर्कामा खुशि, शुभकामना आदान प्रदान गरिरहेका छन् । त्यतिमात्र होइन नयाँ बर्षमा सबैले एकअर्काको समृद्धि र सुस्वास्थ्यको कामना व्यक्त गर्छन् । कोही नयाँबर्षमा रमाइलो गर्ने भन्दै चुरोट, मासु र रक्शीको सेवन गर्छन् । जसले सुस्वास्थ्य होइन खराब स्वास्थ्य बनाउँछ ।
नयाँ बर्षलाई रमाइलोको लागि भन्दा पनि नराम्रो बानीलाई त्याग्ने नयाँ काम शुरु गर्ने उदेश्यका साथ मनाउनु राम्रो हुन्छ ।
सामान्यतः विरामी नभइकन स्वास्थ्यलाई ध्यान दिने हाम्रो बानी छैन् । स्वास्थ्य बिग्रेर जटिल अवस्थामा पुगेपछि मात्रै पश्चाताप गर्नु बेकार हो । आर्थिक र पेशागत ब्यस्तता देखाउँदै प्रायः स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता राख्न नसकेको बताउँछन् । आफ्नो स्वास्थ्यको सबैभन्दा जिम्मेवार व्यक्ति स्वयम हो ।
नयाँबर्ष सन् २०१९ को अवसरमा मुटुरोग विशेषज्ञ डा. ओममुर्ति अनिल स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्दै निम्न सुझाव दिन्छन् ।
नयाँबर्ष मनाउन वा कुनै चाडबाडका अवसरमा प्रायःको बाहिर रेष्टुरेन्ट गएर खाने बानी हुन्छ । रेष्टुरेन्टले सकेसम्म सस्तो दरमा खानेकुरा बनाउने गर्छन् । जुन स्वास्थ्यको लागि हानीकारक हुन्छ ।
रेष्टुरेन्टमा बढी तारेको वा डढेको खानेकुरा, जंकफुड र फास्टफुडले स्वास्थ्यमा हानी गर्छ ।
सकेसम्म रेसायुक्त तरकारी खाने बानी गर्नुपर्छ ।
मोटोपना नियन्त्रण गर्ने
मानिसले खानपिनमा ध्यान नदिँदा यसले अत्याधिकरुपमा मोटोपनाको समस्या हुन्छ । मोटो मानिसलाई अरु रोगले छिट्टै च्याप्ने सम्भावना बढी हुन्छ । साथै उसलाई उच्च रक्तचापको खतरा पनि उतिकै हुन्छ । त्यसैले पोषणयुक्त र शाकाहारी खानेकुरा खाने बानी गर्नुपर्छ ।
बेलाबेलामा स्वास्थ्य परीक्षण गरिरहनुपर्छ । प्रायः ६ महिनामा एकचोटी स्वास्थ्य जाँच गराउने र ३ महिनामा एकचोटी ब्लड प्रेसर जाँच गर्नुपर्छ ।
Last modified on 2019-01-01 14:53:15
ढाड वा गर्दनको दुखाईले पीडित हुनुहुन्छ ? अपनाउनुस् यी उपाय